Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 13/05/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 13/05/2019
(နေပြည်တော်၊ ၁၃-၅-၂၀၁၉ ရက်)
The activities of the Committee for Supporting Peace and Stability in Rakhine State
Sittway May 11, 12
The committee for Supporting Peace and Stability in Rakhine State held separate meetings with political parties, experts and members of the Rakhine State Cabinet in Sittway on 11 May 2019.
The committee met with the representatives of National League for Democracy (NLD), the representatives of Arakan League for Democracy (ALD), the representatives of the Arakan National Party (ANP), the representatives of Union Solidarity and Development Party (USDP) in the morning and then the experts and members of the Rakhine State Government in the evening respectively.
On 12 May 2019, the Committee provided aid at the state government office for those people displaced by the conflicts in Rakhine State.
At the event, the Chairman stressed the importance of shelters for the IDP, he added that the infrastructures will be soon set up, along with health care and food progammes. He also invited additional suggestions with data about the conflict from the attendees and said he appreciated the comments as they have proven invaluable for the Union Government, the state government committees and the affected people, in easing the conflict.
Afterwards, participants discussed their views and perspectives on the conflict. Following the discussion, the Chairman presented endowments ofamonth’s rice ration to the local resident.
ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အတွေ့အကြုံရှိ ပညာရှင်များနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ဆုံခဲ့ကာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်
စစ်တွေ မေ ၁၁၊ ၁၂
ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင် ဦးဆောင်သည့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသည် မေလ ၁၁ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဧည့်ဂေဟာ၌ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အတွေ့အကြုံရှိ ပညာရှင်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအား သီးခြားစီတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် နံနက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ တို့၏ တာဝန်ရှိသူများနှင့် လည်းကောင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံရှိ ပညာရှင်များနှင့် လည်းကောင်း ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် လည်းကောင်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားကို မေလ ၁၂ ရက်တွင် စစ်တွေမြို့ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌက စခန်းများတွင် အဆောက်အဦများ အမြန်ဆောက်လုပ် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် စားသောက်ရေးကို ထောက်ပံ့ကူညီပေး သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုများကို မည်သည့်နည်းဖြင့် ပြေလျော့စေမည်၊ မည်သည့်နည်းဖြင့် ပြေငြိမ်းအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် စသည်တို့ကို အကြံပြုတင်ပြ ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဆိုပါက နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပြည်နယ်အစိုးရ၊ ကော်မတီနှင့် ဒေသနေပြည်သူများအတွက် များစွာအကျိုးရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တင်ပြဆွေးနွေးကြရာတွင် အချက်အလက်များဖြင့် တင်ပြဆွေးနွေးစေလိုပါကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် တိုက်ပွဲရှောင်စုရပ်များမှ ကိုယ်စားလှယ် များက ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ပဋိပက္ခများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သဘောထား အမြင်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌက တိုက်ပွဲရှောင်စုရပ်များမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား တစ်လစာ ဆန်ရိက္ခာအတွက် ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။